Ksnip: Free, obe-ikpo okwu ndabere Qt maka ihuenyo | Site na Linux
Ksnip: Ihe eji eme ihe a Qt na-akwụ ụgwọ na ntanetị maka ihuenyo
Taa, anyị ga-ekwu maka ngwa ngwa ọgbara ọhụụ bara uru akpọrọ "Ksnip". Nke bu otu otutu ngwa, nke ebum n’uche ya weghaa ihuenyo nke anyi Tebụl, nke ahụ bụ, ihe a na-ahụ anya na-agba ọsọ n'ime kọmputa anyị.
Ma, "Ksnip" E wezụga na free, oge a na multiplatform, na-enye ohere dezie ma kekọrịta ihuenyo enwetara ma dezie.
Ọ bụ ezie na, na ubi nke ndị na-ejide ihuenyo, M na-ejikarị ngwa ala m eme ihe Desktọpụ Environment (XFCE na Plasma), mgbe ụfọdụ ọ na-amasị m iji ma kwado Ntuchi.
Otú ọ dị, enwere ọtụtụ yiri ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ ezigbo mma ma maka GNU / Linux, dị ka Windows o MacOS. Ya mere, n'okpuru anyị ga-ahapụ maka ndị nwere mmasị n'okwu a, njikọ metụtara njikọ ndị gara aga na ngwa ndị yiri ya:
"ShareX, na mgbakwunye ịbụ ngwa n'efu na nke mepere emepe, nke nwere ike ijide ma ọ bụ dekọọ mpaghara ọ bụla nke ihuenyo kọmputa, ọ nwere ike ịkekọrịta njide ndị emere, bulite onyonyo, ederede ma ọ bụ ụdị faịlụ ndị ọzọ n'ọtụtụ ebe nwere ike ịhazi na iru eru. Ebumnuche mere ya ka ọ bụrụ ihe ntanye ihuenyo mara mma, usoro ịkekọrịta faịlụ yana ngwa ọrụ arụ ọrụ bara uru." ShareX: Mepee Isi mmalite App maka Nseta ihuenyo na Windows
Flameshot: Ihe ngebichi dị ike maka Linux
Shutter: Ezigbo ngwa ngwa ijide ihuenyo.
–Shots: Ngwaọrụ na-atọ ụtọ iji weghara ihuenyo
1 Ksnip: Nseta ihuenyo na Annotation Ngwá Ọrụ
1.1 Gịnị bụ Ksnip?
1.3 Nbudata, ntinye, jiri na nseta ihuenyo
Ksnip: Nseta ihuenyo na Annotation Ngwá Ọrụ
Gịnị bụ Ksnip?
Dị ka gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub, "Ksnip" es:
"Nseta ihuenyo na ikpo okwu na ngwa nkọwa. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dabeere Qt na-enye ọtụtụ annotation atụmatụ maka gị screenshots."
"Ksnip" na-aga ugbu a maka nke ya 1.9.0 mbipute, nke bụ nanị ụbọchị ole na ole mgbe ahapụchara ya. Yabụ, ugbu a ọ nwere, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, njirimara na ozi ọma ndị a:
Nkwado Multiplatform: Maka Linux (X11, Plasma Wayland, GNOME Wayland, na xdg-desktop-portal Wayland), Windows, na macOS.
Were ya: Na - ejide ebe akụkụ anọ nwere ike ịdọrọ ya na cursor òké, nke ihuenyo / nyochaa ebe cursor òké dị ugbu a, nke ihuenyo niile, gụnyere ngebichi / nlele niile, nke ihuenyo windo nke nwere elebara anya ugbu a, nke window window n'okpuru òké cursor, ndị ọzọ modalities ma ọ bụ customizations.
share: Kwaga screenshots ozugbo imgur.com na onye ọrụ ma ọ bụ na-amaghị aha mode. Ọbụna bulite ha site na ederede ederede njirimara onye ọrụ.
Dezie: Na-eme ka ọ dị mfe annotate (edit) screenshots na pen, welara, rektangulu, ellipse, ederede, na ndị ọzọ na mmetụta. Na mgbakwunye, iji kwe ka iji akwụkwọ mmado gị ma ọ bụ nke aka gị mee ihe, tinye nsonaazụ obfuscation na mpaghara nke onyonyo ahụ na blur na pixelation, ma tinye mmetụta na onyonyo ahụ (onyinyo, grayscale, gbanwee agba ma ọ bụ ókèala).
Maka ntinye ya, enwere ike itinye ya ozugbo n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - GNU / Linux Distros, site na Njikwa ngwugwu amaala, eserese, ma ọ bụ njikwa. Ma, iji gị ụdị ọhụụ ị nwere ike budata ma tinye faịlụ dị mkpa ma ọ bụ dabara adaba, site na ndị a njikọ na isoro ntuziaka zuru ezu nke ọzọ njikọ. Iji mee ihe, ọ ga-agba ọsọ naanị site na Nchịkọta Ngwa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwa ahụ, ọ dị iche installers na nsụgharị, na ụdị ntinye, ị nwere ike ịga na njikọ ndị a na "Ksnip" na:
Lọ ahịa KDE
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere free, free na cross-ikpo okwu ngwa a na-akpọ «Ksnip», njirimara ya niile na akụkọ banyere ụdị ọhụụ ya «1.9.0» na nso nso a weputara; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ksnip: Ihe eji eme ihe a Qt na-akwụ ụgwọ na ntanetị maka ihuenyo